यस्ता छन् दाह्री–जुँगाका अहिले चलेका स्टाइल ! « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
यस्ता छन् दाह्री–जुँगाका अहिले चलेका स्टाइल !
१८ पुष २०७५, बुधबार ११:११ मा प्रकाशित
फेसनप्रति कन्सियस आमपुरुषले पनि स्टाइल–स्टाइलका दाह्री–जुँगा राख्न थालेका छन् । अझ, कर्पोरेट हाउसको पनि दाह्री–जुँगाप्रति आकर्षण बढेको छ । दाह्री–जुँगाको स्टाइल मानिसको लाइफ स्टाइलमा र प्रोफेसनमा पनि भर पर्दछ ।
जस्तै, नेपालमा चाहेर पनि आर्मी–पुलिसका अफिसरहरूले दाह्री पाल्न सक्तैनन् । जुँगा पाल्न भने उनीहरूलाई छुट छ । अब जानौँ हाल नेपालमा कुन–कुन दाह्री–जुँगाका स्टाइल चलेका छन् भन्ने :
यो कटमा दाह्री–जुँगा पूरै राखिएको हुन्छ । चिउँडोतिर झरेको जुँगा छोटो हुन्छ । तर, चिउँडोको दाह्री भने अलि लामो हुन्छ । करिब ९६ प्रतिशतको फेसिलस स्ट्रक्चर स्क्वायर फिटमा हुन्छ । लाम्चो फेस हुनेले यस्तो स्टाइल राख्दा गाला अलि सानो देखिन्छ । त्यो राम्रो पनि देखिन्छ ।